ताराहरु काम सजिलो बिजुली लागि टर्मिनल ब्लक
जाहिर छ, गइसकेको दिन जब गरिब सँगी-elekrik स्थापना ताराहरु twists को एक ठूलो रकम के थियो जब। यो प्रत्येक अन्य बिजुली तार एक तरिका जडान छ। थप मिलाप र ढाक्नु पर्छ यस्तो मिश्रित माउन्ट को नियम अनुसार। काम लामो र laborious, तर यो मामला मा परिणाम राम्रो थिएन। एक ठाउँमा यस्तो यौगिकों धेरै थियो, तर अझै पनि एक ठूलो क्रस-खण्ड तार प्रयोग भने, विशाल श्रम लागत निचोड सबै स्प्लिटर बक्स मा मुड। एक बिजुली वर्तमान को प्रभाव अन्तर्गत समय खण्डमा संग तार बीच सम्पर्क गायब।
कहिल्यै बिजुली ताराहरु सामना छ जो सबैलाई हामी ताराहरु लागि नयाँ टर्मिनल ब्लक भेट जो संग आनन्द बुझ्न हुनेछ। कि, हुन छ यस्तो र प्रयोग गरिएको टर्मिनल ब्लक गर्न, तर तिनीहरूले तार आवश्यक एक स्क्रू संग fastened छ जसमा एकदम भारी बक्से थिए। तिनीहरूले luminaires को जडान लागि मुख्य रूप प्रयोग गरिन्छ। तपाईं धेरै शायद यो अवस्थामा गरिएको छ: तपाईं छत, टाउको र हात माथि battened नजिकै एक सीढी मा खडा छन् सानो स्क्रू टर्मिनल ब्लक मा पेचकस मोड। एक अप्ठ्यारो आन्दोलन - र यो सानो संक्रमण तल्ला गर्न पर्छ। राम्रो र कुन शब्द तपाईं सीढी बन्द रही र खोज्न जा भन्नुभयो? आज किनभने त्यहाँ ताराहरु लागि उल्लेखनीय टर्मिनल ब्लक थिए, यो मुक्त छन्।
यो तपाईं तिनीहरूलाई बारेमा थप बताउन समय छ। उदाहरणका लागि, WAGO ताराहरु लागि टर्मिनल ब्लक उपकरणहरू दृढ एक पेचकस प्रयोग बिना तार clamping छन्।
बाह्य, यो एकदम प्वालहरू र levers संग सानो प्लास्टिक दानाको छ। आफ्नो नम्बर (2 8) यो टर्मिनल जोडिएको गर्न सकिन्छ कि तार को संख्या पारस्परिक रहेको छ। सञ्चालनको सिद्धान्त सरल छ। को ठाडो स्थिति लीवर Cocked। तार अलग देखि छोट्याउन र प्वाल मा सम्मिलित गरियो। लीवर कम र दृढ एक वसन्त को माध्यम द्वारा यसलाई पकड वाला। ढाँचा मा सीधा टर्मिनल शरीर मा उपलब्ध प्रयोग को लागि निर्देशन। र तपाईं यन्त्र तार मा समातिए छैन भनेर पत्ता लगाउन सम्मेलन योजना मा अचानक भने, त्रुटि समाधान गर्न सजिलो छ: फेरि लीवर cocking र यसलाई सुरक्षित हटाउनुहोस्। यी विनिर्माण जो कम्पनी, ताराहरु लागि टर्मिनल ब्लक जर्मन, त्यसैले गुणस्तर ग्यारेन्टी छ -।
परिणाम सही छ स्प्लिटर बक्स। तार जडान बलियो र टिकाउ, तिनीहरूले थप इन्सुलेशन आवश्यक छैन। टर्मिनलहरु धेरै ठाउँ लिन छैन अप र सारा संरचना सजिलै बक्स मा फिट गर्न सक्नुहुन्छ।
एक शब्द - सुन्दर! र समय यो धेरै कम काम एक शास्त्रीय मोड र टांका प्रयोग भन्दा लिन्छ, र वस्तुतः कुनै उपकरण आवश्यक छ। थप मानव गर्ने ताराहरु लागि टर्मिनल ब्लक संग आएका एक "धन्यवाद"! यस्तो उत्पादनहरु को मूल्य, निर्माता निर्भर जडान प्रकार र जडान गर्न सकिन्छ तार को संख्या,260 rubles देखि हुन सक्छ। तर मेरो व्यक्तिगत धारणा: बचत लायक छैन, राम्रो आफ्नो बल, नसाहरू र समय राख्न। ताराहरु लागि टर्मिनल ब्लक प्रयास गर्नुहोस्। र फरक महसुस!
विशेषताहरु र समीक्षा: इलेक्ट्रोड "पत्थर को खम्बा" वेल्डिंग
प्रकार, अपरेटिङ सिद्धान्तहरू: snegoplavilnye स्थापना
पानी तताउने "ओएसिस": वर्णन, मोडेल समीक्षा
बगैचा हजारी: बगैचा उपकरण खरीद को आधारभूत नियमहरू
Chainsaw चेन लागि तेल। श्रृंखला आरी को स्नेहन तेल कस्तो प्रकारको प्रयोग?
आफ्नै हातले रचनात्मकता लागि धातु पेंडेंट
विवाह चीन मा के बधाई चयन
उच्च सुरुवात: निष्पादनको प्रविधि, टोली। ट्रयाक र फील्ड एथलेटिक्स
Reticular गठन। मोटर प्रतिक्रिया संग सम्बन्ध
सबवेको सपना कस्तो छ? व्याख्या र नींदको अर्थ
छोराछोरीको Yersiniosis: गराउनुहुन्छ, लक्षण, निदान र उपचार
Liniment tsikloferona: कसरी पाँच दिनमा herpes निको गर्न?
Interlock - यो प्रयोग गरिएको छ कपडा र जहाँ कि
यो उल्लेखनीय मेट्रो स्टेशन Profsoyuznaya
"GTA: SAMP-आर.पी." - भनेर के? आर.पी. सर्तहरू
बिरुवा एक जलीय समाधान स्वास्थ्य को लागि महत्वपूर्ण छ